डेंगुले अस्पतालमा ठेलमठेल | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सुरज मास्केको नेतृत्वमा नेवा गुठी कुवेतको पुनर्गठन
नुवाकोट धादिङ रसुवा समाज कुवेतद्वारा ब्लड क्यान्सर पीडित आसिमा तामाङलाई आर्थिक सहयोग →
काठमाडौं : शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा.शेरबहादुर पुनलाई बिरामी जाँच्न भ्याइनभ्याइ छ । भन्छन्, ‘खाना खान पनि फुर्सद छैन ।’ उनी बिहान ९ बजे अस्पताल पुग्छन् । डेंगुको शंका गर्दै जाँच गर्न आएका बिरामीको लाइन हुन्छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक पानी पिउनै नपाई जाँच्न व्यस्त हुन्छन् । ‘बिरामीलाई सोध्ने र उनीहरूका जिज्ञासा समाधान गर्दा नै मुख प्याकप्याक हुन्छ’, अर्का चिकित्सक भन्छन् । भीडभाडले अस्पतालमा जात्रा लागेझैं देखिन्छ । ठेलमठेल हुन्छ । बिरामीको अनुहार निन्याउरो देखिन्छ । उनीहरूका आफन्त आक्रोशित भेटिन्छन् । अस्पतालनजिकै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टिकट काउन्टरमा पनि यस्तै दृश्य देखिन्छ । डेंगुको आशंकामा रगत जँचाउने र रिपोर्ट लिनेको लाइन बिहानदेखि लागेको हुन्छ ।
भीड थेग्न गाह्रो भो
डा. बासुदेव पाण्डे, निर्देशक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु
जचाउने आउनेको भीड कस्तो छ ?
डेंगुको लक्षण देखियो कि जचाउन टेकु अस्पताल जानुपर्छ भन्ने सन्देश सबैतिर फैलियो । यो खबर फैलने बित्तिकै सामान्य ज्वरो आए पनि शंका गरी जँचाउनेको भीड दिनहुँ बढेको छ ।
संक्रमित भएका सबैलाई डेंगु हुँदैन ?
सय जनालाई डेंगु संक्रमण भएको छ भने ९० प्रतिशतलाई त केही दिनपछि आफैं ठीक हुन्छ । बाँकी १० प्रतिशतलाई मात्र डेंगु हुने हो । यसमध्ये पनि १÷२ प्रतिशतलाई मात्र जटिल अवस्था हुने हो ।
परामर्श एवं उपचार व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ कि ?
जचाउन टेकुमै जानुपर्छ भन्ने सोच सबै व्यक्तिमा भइदियो । भीड थेग्न गाह्रो भएको छ । लोड खप्न सकिएन । जँचाउन आउनेलाई सजिलो पार्न छुट्टै ज्वरो क्लिनिक स्थापना गरियो । त्यो साँघुरो भएको छ । बिरामीको भीड छ । देखिहाल्नु भयो । स्टाफलाई माइक ल्याउ भनेर अस्तिदेखि भनेको हुँ । कुपनको व्यवस्था गर्न भनेको हुँ । समयमै टक्क काम गर्न सक्ने कर्मचारी नहुँदा निर्देशन कार्यान्वयन पनि गाह्रो हुँदो रहेछ । ‘रेपिड रेस्पोन्स टिम’ पनि बनाउन सकिएन । लाइन बसेको बेला पानी पर्छ । टेन्ट राखिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुरा धेरै गर्छ । तर सहयोगको पाटो धेरै सुस्त छ । यसले समस्यामा पारेको छ । उपचार व्यवस्थापनमा हाम्रो मात्र जिम्मेवारी होइन नि ।
उपचारमा व्यवस्थापनमा के चुनौति देखिएको छ ?
जनशक्ति कमी छ । पर्याप्त जनशक्ति भए उपचारमा सहज हुन्थ्यो । अन्य साधन स्रोत पनि अपर्याप्त छ ।
ज्वरो आउनेबित्तिकै आत्तिने बिरामीलाई के भन्नुहुन्छ ?
ज्वरो आउनुका साथै शरीर तथा टाउको अति दुख्ने हुन्छ । शरीरमा बिमिरा आउँछ । त्यस्तो लक्षणले जटिलता हुने होइन । आत्तिएर यहाँ आइहाल्नु पर्दैन । झोलिलो पदार्थ खाने गर्नुपर्छ । प्यारासिटामोल सेवन गर्न सकिन्छ । बजारमा गएर ब्रुफेन नकिनदिनुहोस् । गम्भीर भएको अवस्थामा अन्य संस्था वा अस्पतालमा पनि उपचार गराउन सकिन्छ ।
सबैको सहयोगले मात्र नियन्त्रण सम्भव
उपेन्द्र यादव, उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
तीन महिना भइसक्दा डेंगु नियन्त्रण हुन सकेन नि ?
– डेंगु नियन्त्रण गर्नु भनेकै लामखुट्टे मार्ने हो । घर ’round सरसफाई गर्नुपर्छ । पानी जम्न नदिने हो । पानी संकलन गरी खुला नछोड्ने गर्नुपर्छ । सबै जनताले ससफाईमा ध्यान दिने, पानी खुला नराख्ने, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरे डेंगु नियन्त्रण हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो ?
– मन्त्रालय एक्लैले के गर्न सक्छ र ? स्थानीय निकाय, प्रदेशलगायत सबै सरोकारवाला पक्ष नलागीकन केही हुँदैन । मन्त्रालय एक्लैले गरेर के हुन्छ र ? सबै पक्षको सहयोगले मात्र डेंगु नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ ।
लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियानमा सेना प्रहरीको सहयोग लिने चर्चा थियो नि ?
अहिले सहयोग लिने बेला भइसकेको छैन । आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग लिन सकिन्छ । अहिले आवश्यकता परेको छैन ।(अन्नपूर्ण )